एमाले एकताको छलफलमा नेता भीम रावललाई किन राखिएन ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले एकताको छलफलमा नेता भीम रावललाई किन राखिएन ?
नेकपा एमाले एकताको प्रयास फेरि सुरु भएको छ । फुटको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेको एकता कायम जोगाउने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । हिजो सोमबार मध्यरातसम्म एकताका प्रयासको लागि माधव नेपाल पक्षका र ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए ।
बैठकमा यसअघि गठित कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरु नै बैठकमा सहभागी थिए । ओली पक्षको नेताहरुले कार्यदलको अवशेष नरहेको र नयाँ शिराबाट एकता प्रयास भएको बताएका छन् । माधव नेपाल पक्षको कार्यदलको संयोजकमा नेता भीम रावल थिए । हिजो सोमबार भएको छलफलमा भीम रावल थिएनन् । माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका अन्य नेताहरु उपस्थित भएको छलफलमा नेता भीम रावललाई किन राखिएन ?
पार्टी एकताको प्रयासमा राजधानीको दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा राति ११ बजे सम्म छलफल भयो । पार्टीलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन सहमति प्रयास भएको थियो । ‘नयाँ शिराबाट सहमति प्रयास सुरु भएको छ, यसअघिको कार्यदल अहिले सक्रिय छैन’ ओली पक्षका एक नेताले भने ।
ओली पक्षबाट कार्यदलका संयोजक समेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार सहमतिको प्रयास स्वरुप आफूहरुले झण्डै ५ घण्टा छलफल भएको बताए । उनका अनुसार ‘सहमतिको लागि प्रयास गरियो, छलफल त सकारात्मक छ तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । बैठकमा ओल पक्षबाट नेम्वाङसहित संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।
यस्तै माधव नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई सहभागी थिए । नेता भीम रावल सहभागी थिएनन् । नेपाल पक्षले भने जेठ २ मा फर्किनुपर्ने यसअघिको अडान कायम राखेको थियो भने ओली पक्षले जेठ २ को सेरोफेरोसम्म पुग्न सकिने जनाएका थिए । एमालेले नेता भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासनसमेत गरिसकेको छ ।
नेकपा एमालेले पार्टी एकताको पहल गर्न गठित कार्यदल पुनर्गठन नभएसम्म अन्य संयन्त्रबाट छलफल भइरहेको जनाएको छ।स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले एकताको लागि अन्य संयन्त्रबाट पहल भइरहेको कार्यदल सक्रिय नभएको जनाए ।
कार्यदलमा रहेका कतिपय नेता कारवाहीमा परेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म अन्य संयन्त्रबाट एकताको पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । भीम रावल कार्यदलका संयोजक थिए, तर उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेको हुनाले अर्को शिराबाट भएको वार्तामा सहभागी नगराइएको ओली पक्षका एक नेताले बताए ।
वार्ता टोलीमा माधव नेपाल पक्षको संयोजक रहेका भीम रावल साधारण सदस्यबाटै निष्कासित भइसकेका छन् । यसबीचमा दुवै पक्षबीच भएका वार्तामा भीम रावल बाहेकका नेताहरु बस्दै आएका छन् । प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी विभाजन हुन नदिन हदैसम्मको लचिलो बनेर जाने बताए ।